Pep Guardiola iyo caawiyihiisa oo laga helay COVID-19 – Gool FM
Pep Guardiola iyo caawiyihiisa oo laga helay COVID-19
Dajiye January 6, 2022
(Manchester) 06 Jan 2022. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola iyo caawiyihiisa Juanma Lillo ayaa laga helay caabuqa saf-mareenka ah ee Korona Fayras, sidaas darteed waxay seegi doonaan kulanka habeen dambe ay tartanka FA Cup ay kula ciyaari doonaan kooxda Swindon Town.
Natiijada ka soo baxday baaritaankii ugu dambeeyay ee PCR, oo ay mareen tababare Pep Guardiola iyo caawiyihiisa Juanma Lillo, ayaa lagu xaqiijiyay in laga helay caabuqa Korona Fayras.
21 isugu jira ciyaartooy iyo shaqaale ka tirsan kooxda Manchester City ayaa waxay hadda ku jiraan karantiil sababa la xiriira COVID-19, iyada oo 14 ay yihiin shaqaale iyo 7 ciyaartoy oo kooxda koowaad ah.
Caawiyaha kale tababare Pep Guardiola ee Rodolfo Borrell ayaa hoggaamin doona Citizens kulanka habeen dambe ee jimcaha ah.
Manchester City ayaa ku jirta kaalinta koowaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, iyadoo leh 53 dhibcood 21 kulan oo ay ciyaartay, waxay adkaatay 17 kulan, waxay barbardhac gashay 2 kulan, halka sidoo kale laga adkaatay 2 kulan kale.
Kooxda Guardiola ayaa 10 dhibcood ka sareysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Chelsea, taasoo ka dhigeysa inay ku sii dhawaanayaan ku guuleysiga horaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
17 ciyaaryahan oo aan ku faraxsanayn Kooxda Manchester United & Qaar ka mid ah oo magacyadooda la shaaciyey
“Blues weli way ku guuleysan kartaa Premier League” – Halyeey Chelsea ah